"ပိပိတို့ စကားဝိုင်း"ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ မနန္ဒာပြောပြတဲ့ "ဘုန်း" နဲ့ Feminism အကြောင်း - For her Myanmar
“Feminist တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစ်မရဲ့ အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် အစ်မက ဘုန်းဆိုတဲ့ အရာကို လက်မခံချင်ဘူး။”
ယောင်းတို့ရေ… ဒီတလော Social Media ပေါ်မှာ #Womentoohavehpone (အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း ဘုန်းရှိတယ်) ဆိုတဲ့ Hashtag လေးနဲ့ ပရိုဖိုင်တွေ ပြောင်းကြတာ သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်… ဒီကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့တာက မအေးသီရိကျော်၊ မပြုံးသက်သက်ကျော်၊ ဒေါက်တာ သက်စုထွေးနဲ့ မနန္ဒာ နဲ့ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ တို့ အဖွဲ့ကနေ စတင်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ဘုန်းပိုကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို စပြီး စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဒီကမ်ပိန်းဟာ မေလ ၂၀ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ပြီး ဆယ်ရက် ကမ်ပိန်းဖြစ်တာမို့ ၃၀ ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အက်ဒ်မင့်အတွက်တော့ ဒီကမ်ပိန်းဟာ တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့တဲ့ မနန္ဒာနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဒီလို အမေးအဖြေလေးတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ယောင်းရေ…
Q : အရင်ဆုံး မမအကြောင်းလေး မိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင့်..
A : အစ်မနာမည် နန္ဒာလို့ခေါ်တယ်။ အစ်မက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်စံဆိုတဲ့ ရွာကနေ လာတာပေါ့နော်.. ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတာကတော့ (၃)နှစ်ကျော်ကျော် (၄)နှစ်လောက် ရှိပြီ။ ပြီးတော့ အစ်မက စာတွေ ရေးဖြစ်တယ်။ ဘာသာပြန်ဖြစ်တယ်။ စာရေးတယ်ဆိုတာ Feminist Literature လို့ပဲ ခေါ်ရမှာပေါ့နော့်.. အဲ့ Category ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ Feminist စာပေ လို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခု မကြာမီ အစ်မက အင်္ဂလိပ်လို တစ်အုပ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့။ ပုံမှန်အားဖြင့် အစ်မက ဘာသာပြန်တဲ့ဟာပဲ ထုတ်ထားတာ များတယ်။ ပြီးတော့ အစ်မ ကိုယ်ပိုင် Blog လည်း ရေးဖြစ်တယ်။ ရေးတာတော်တော်များများကလည်း Feminist စာပေတွေ၊ ကဗျာတွေပဲ များတယ်။
ပြီးရင် ဒီလို ပြဇာတ်တွေမှာ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ The Vagina Monologue လို Play (ပြဇာတ်) ဆိုရင်တော့ အစ်မက Directing ပိုင်းနဲ့ Producing ပိုင်းကို တာဝန်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာ.. ပြီးရင် ကျန်တဲ့ဟာ တော်တော်များများမှာ အစ်မက Fulltime Feminist အနေနဲ့ ရပ်တည်တယ်။
Vagina Monologue Performance တွင် အဖွင့်စကား ပြောခဲ့စဉ်က (Photo – Evelyn Yu Yu Swe)
Q: လတ်တလော မမလုပ်ဖြစ်နေတာက?
A: လောလောဆယ်က အစ်မတို့ ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီ အစ်မ ဘာသာပြန်တဲ့ စာရေးဆရာမကို မြန်မာနိုင်ငံဖိတ်ဖို့အတွက် အစ်မတို့ ရည်ရွယ်နေတာပေါ့နော်.. အဲဒါ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါပြီးရင် ဒီ ကမ်ပိန်းပေါ့နော်… #Womentoohavehpone ဆိုတဲ့ ဖိုဝါဒီကို စိန်ခေါ်တဲ့ ကမ်ပိန်းတစ်ခုပေါ့နော်.. အဲဒါကို လုပ်နေတယ်။ အဲဒါပြီးရင် အကြမ်းဖက်မှုကို storytelling ပုံစံနဲ့ ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်၊ အရမ်းထူထူကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး.. ပါးပါးလေးနဲ့ လူတွေကို မက်ဆေ့ခ်ျအများကြီးပေးတဲ့ စာအုပ်လေးကို ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့…အဲ့ ၃ခုကို လောလောဆယ် လုပ်နေတယ်။
Q : လတ်တလော လုပ်ဖြစ်နေတာတွေထဲက #womentoohavehpone ဆိုတဲ့ ကမ်ပိန်းကို ဘယ်ကစလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးလည်း သိပါရစေ မမ။
A : ဟိုးတလောက Social Media ပေါ်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ထဘီကိစ္စပေါ့.. ဒီကိစ္စပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ဖြစ်လာတဲ့ Discussion တွေက ဘုန်းဆိုတာနဲ့ပဲ ကပ်နေတယ်။ မိန်းမတွေက ဘုန်းမရှိဘူး။ ယောက်ျားတွေထက် တစ်ဆင့်နိမ့်ပါတယ်၊ တစ်ဆင့်နိမ့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Comment တွေ၊ Conversation တွေကြောင့်။ ပြီးတော့ မိန်းမမဝင်ရဆိုတဲ့ နေရာကို ဝင်သွားတယ်။ ဘာညာပေါ့နော်.. အဓိက အဲဒီ Conversation တွေက အစ်မတို့ကို ဒီကမ်ပိန်းစဖို့အတွက် Provoke လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်.. တွန်းအားပေးလိုက်သလိုပဲပေါ့။
ပြီးတော့ အစ်မ ဘုန်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောမယ်နော်.. အစ်မကြားဖူးသလောက်ဆိုရင် ဘုန်းဆိုတာကလေ အစတုန်းက Originally စခဲ့တာကလေ အလုပ်လုပ်တဲ့လူကို ပြောတာ ညီမလေးရယ်။ ဥပမာ ညီမလေးက အလုပ်လုပ်တယ်။ စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်ကိုင်တယ်ဆိုရင် ဒါ ညီမလေးကို ဘုန်းရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်လို့ အသိအမှတ်ပြုတယ်။ အဲဒီစကားလုံးက အဲ့အတွက် စခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျ အဲဒီ အသုံးအနှုန်းကို ဘာသာရေးနဲ့ သွားပြီး စပ်ပစ်လိုက်တယ်။
အမျိုးသမီးကို ဘုန်းနဲ့မကပ်တာက ဒီဘုန်းသည် ယောက်ျားလေးနဲ့ပဲ ပါလာတဲ့အရာ၊ ယောက်ျားလေးတွေမှာပဲ ရှိသင့်တဲ့အရာဆိုပြီးတော့ ဘုန်းဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ Spiritual Power က အမျိုးသားတွေဆီမှာပဲ ကပ်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ ဥပမာ မြန်မာတွေ အရမ်းသုံးကြတဲ့ “ယောကျာ်းတို့ ဘုန်း လက်ရုံး၊ မိန်းမတို့ ဘုန်း ဆံထုံး” ဆိုတာတွေကး မညီမျှမှုကို ထင်ရှားစွာ ပြလိုက်တာပဲ။ ဒါက အမျိုးသားတွေမှာသာ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်း၊ လက်ရုံးရည် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ messageကို ပေးနေတာလေ။ Feminist တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစ်မရဲ့ အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် အစ်မက ဘုန်းဆိုတဲ့ အရာကို လက်မခံချင်ဘူး။ အမျိုးသားလည်း မရှိဘူး။ အမျိုးသမီးလည်းမရှိဘူး။ ဒါက လူလူချင်းပဲ။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့လူ၊ မကောင်းတာ လုပ်ရင် မကောင်းတဲ့လူ ဒါပဲပေါ့နော်.. အဲ့လိုမျိုးပဲ ခံယူထားတယ်။ လူတွေ လက်ခံထားတဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဘုန်းဆိုတဲ့အရာကို မိန်းမတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Positive message ကို လူတွေဆီ ပို့ပေးချင်တာပေါ့။
Q : ကမ်ပိန်းအပေါ် Public ရဲ့ Response ကရော ဘယ်လို ရှိလဲ အစ်မ
A : အိုး.. အစ်မတို့ မထင်ထားဘူး။ ခုနက ညီမလေးကို အစ်မရှင်းပြသလိုပဲ။ တချို့တွေက ဒီဘုန်းဆိုတာ ဖိုဝါဒီက ထွင်ထားတဲ့ စကားလုံး၊ ဖိုဝါဒီကို အားပေးတယ် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုပဲ အစ်မတို့က မျှော်လင့်ထားတာ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် Feminist တွေဆီကပဲ အစ်မတို့ မျှော်လင့်ထားတာပေါ့နော်.. ဒါပေမဲ့ message က အစ်မတို့က Clear message ပေးထားတယ်။ အစ်မတို့ ကမ်ပိန်းရဲ့ Description ကိုလည်း သေချာရေးထားတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီဟာကို လုပ်ရတယ်။ ဒီဟာက ဘာတွေကို အခက်အခဲ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ရေးထားတာ ရှင်းလင်းမှုရှိတယ် ထင်တယ်။ အများကြီး ပါဝင်လာတယ်။ ၃၀၀၀ နီးပါးလောက် ပါဝင်လာတယ်… ဒါက ခုနက သီရိကို အစ်မမေးကြည့်တော့ ပြောပြတာ။ Page လည်း Like လုပ်တဲ့လူ များလာတယ် တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်းမှာ… အခုထိတော့ ကောင်းတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ရတာပေါ့နော်.. တစ်ခု အစ်မသတိထားမိတာက တော်တော်များများလေးကတော့ ဒါပေမဲ့ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ပိုပြီး ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ် အဲဒါက.. ပါဝင်တဲ့သူ တော်တော်များများက အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ တော်တော်များများလေးကလေ အသက်အရွယ်မျိုးစုံပေါ့နော်.. ငယ်ငယ်လေးကနေ ဒီ ၁၅ လောက်ကနေ အသက်ကြီးပိုင်းတွေ ၄၀၊ ၅၀ လောက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာတာကို တော်တော်လေး တွေ့ရတယ်။ သူတို့ ဒီလို ပါဝင်ပေးတာကို အစ်မလည်း တော်တော်လေး အံ့သြဝမ်းသာတယ်။
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY အတွက် UNOPS တွင် speech ပေးခဲ့စဉ် (Photo – Anders Lee)
Q: မသိမသာ ခွဲခြားမှုတွေကို လက်ခံနေကြတဲ့အပေါ် မမရဲ့ အမြင်ကရော?
A : ဒါကလေ Normalization လို့ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်တဲ့အရာကို ပုံမှန်လို့ ထင်လာတတ်တာမျိုးလေ။ ဥပမာ မိသားစုထဲမှာ အစ်ကိုက တစ်မျိုး ဆက်ဆံခံရတယ်၊ ကိုယ်က တစ်မျိုး ဆက်ဆံခံရတယ်။ ဆိုပါစို့.. ကိုယ့်အမေက ကိုယ့်အဖေလောက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရေးပေးမခံရဘူးဆိုတာကို မြင်ပြီး ကြီးလာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြီးလာရင် သူ့ကို လူတွေက အမျိုးသားတစ်ယောက်လောက် အရေးမပေးဘူးဆိုရင်လည်း သူ လက်ခံနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆို သူကိုယ်တိုင်က အဲဒီလို မိသားစုမှာ ကြီးလာတဲ့အတွက်ပေါ့… တကယ်တော့လေ ညီမလေး.. အဲဒီလို Gender Issue တွေကလေ အကြီးကြီး ကြည့်စရာမလိုဘူး.. အိမ်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ အိမ်ထဲကနေပဲ စလာတာပဲ။ ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတာက အိမ်ကနေ စတာ။ အိမ်ကနေ လမ်းကို ရောက်သွားတယ်။ လမ်းကနေ ကျောင်းကို ရောက်သွားတယ်။ ကျောင်းကနေ ဘုရားကျောင်းရောက်သွားတယ်။ အဲ့လိုပေါ့။ အကြီးကြီးနေရာတွေမှာ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ သေးသေးလေး နေရာကနေပြီး ဒါဟာ ပုံမှန်ပဲဆိုတဲ့ Normalization ဖြစ်အောင် ပုံသွင်းခံခဲ့ရတာ။ ယောက်ျားက ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးမွေးပြီး ထိန်းကျောင်းရတဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဆိုတာ အဲ့လိုပဲ… ခံရတယ် ဆိုတဲ့ ဖြေသိမ့်မှု တစ်ခုအောက်မှာ အစ်မတို့က ငြိမ်လိုက်ရတာမျိုးပေါ့။ ဒါက ပြောင်းလို့ရတယ်။
Related Article >>> ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ ပြောပြတဲ့ ဓမ္မတာလာခြင်း နဲ့ လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆများအကြောင်း
Q: Feminist ဆိုတာကို အစ်မ ဘယ်လို ခံယူထားလဲ။
A: အဓိကက Feminist တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာက ကိုယ်သင်ယူပြီးသား ဖိုဝါဒီ အကျင့်စရိုက်တွေကို ဖယ်ဖျောက်တာ။ ဥပမာ- ကိုယ့် မိန်းမ ဖြစ်ခြင်းကို အထင်သေးစော်ကားပြီး နှိမ့်ချပြောဆိုတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာဆို အသံ တိတ်နားထောင်တာမျိုး မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ့် ခံယူချက်ပေါ်မှာ ကိုယ် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်တယ်။ ပြောဖြစ်တယ်။
ဒီမှာက ယောက်ျားလေးတွေကိုဆို Be Nice ဆိုပြီး သင်တာမျိုး သိပ်မတွေ့ရဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင်နေဆိုတာလောက်ပဲ။ မိန်းကလေးတွေကိုကျတော့ Constantly(တောက်လျှောက်) ငယ်ငယ်ကတည်းကကို သူများတွေကို Nice ဖြစ်ဖို့ သင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် Rape Case တို့ Sexual Harassment ဖြစ်တာတို့ အဲလို ကိစ္စတွေဆိုရင် Public Place မှာ ဖြစ်နေတာတောင်မှ မိန်းကလေးတွေက ကြိတ်ခံနေကြရတာ။ အသံမထွက်ရဲကြဘူး။ အဲဒါလေ ဘေးလူကို ထိခိုက်မှာစိုးလို့။ သူကသာ အော်လိုက်ရင် အဲဒီ ဘေးလူကို ထိခိုက်မှာ၊ သူများက တစ်ခုခု လုပ်မှာ ဒါမှမဟုတ်ရင် သူ့ကို သူများက မယုံကြမှာ အဲဒီကြောက်စိတ်တွေ အောက်မှာ မိန်းကလေးတွေ ရှင်သန်လာတာ တအားများတာကြောင့်ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေ တိတ်နေရင် အစ်မတို့က အရမ်းသဘောကျကြတယ်။ ဘာလို့လဲ… မိန်းကလေးဆိုတာကို စကားမပြောဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး အိမ်အလုပ်တွေ နိုင်နိုင်နင်းနင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကို မိန်းကလေးတွေမှာ ရှိရမယ့် အရည်အချင်းတစ်ခုလို သတ်မှတ်ထားကြလို့လေ။ ကိုယ့်အမြင်ကိုယ် ပြောပြရဲတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆို လူတွေက အမြင်ကတ်ကြတယ်။ ဒါကို ပြောင်းလဲ ပစ်ရမှာပေါ့။
Q : Feminism အပေါ်မှာ လူတွေရဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းကရော မမ။ ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိလဲ?
A :Feminist ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ Negative ဖြစ်နေတဲ့ အရာနဲ့ attached ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလဲဆိုရင် Feminist ဆိုရင် ယောက်ျားတွေကို မုန်းကြတယ်။ ဟို.. သမားရိုးကျနည်းကို မလိုက်ကြဘူး။ မလေးစားကြဘူး။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မလေးစားကြဘူးဆိုတဲ့ Negative side တွေကိုပဲ လူတွေက အစာကျွေးခံနေရတဲ့အခါမှာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို လွတ်သွားတယ်။ Feminist တွေကိုလက်ခံဖို့က သူတို့အတွက် အရမ်းကို ခက်နေတာ။ မြန်မာနိုင်ငံ အတိုင်းအတာနဲ့ရော၊ နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာနဲ့ရော ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီ Feminism ကို လက်ခံတဲ့အား အရမ်းနည်းနေတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် ညီမလေးရယ်… နံပါတ် (၁) ကကျတော့ ခဏကပြောတဲ့ ဘုန်းဆိုတဲ့ Concept ပေါ့နော်… မိန်းကလေးတွေက မွေးကတည်းက ယောက်ျားလေးတွေထက် တစ်ဆင့်နိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို သွေးတွေ၊ သားတွေ၊ အရိုးတွေထဲထိ စွဲနေအောင် ယုံကြည်ထားကြတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကြီးလာတဲ့အတွက် အဲဒါကို မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ မိန်းကလေးနဲ့ ယောက်ျားလေးက တန်းတူတယ်ဆိုတာကို ပြောနေတဲ့ Feminist ကို ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မရဘူး။ နောက်တစ်မျိုးကျတော့ Feminist ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အနောက်တိုင်း စကားလုံး၊ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ အမြင်မှားမှုတွေ၊ အရိုးစွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ပြောရမယ်ဆို ဒီမိုကရေစီဆိုတာကလည်း အနောက်တိုင်းက လာတဲ့ Idea ပဲလေ.. ဘာကြောင့် အနောက်က လာတဲ့ Idea ကြီးအတွက် ပေးဆပ်နေကြတာလဲ? ဘာကြောင့် ဖက်တွယ်ထားကြတာလဲ? မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေးဆပ်နေကြတာလေ။ Feminism ကလည်း အဲဒီလိုပဲဆိုတာကို တော်တော်များများက မချိတ်ဆက်မိဘူး။ အဲဒါကျတော့လည်းတစ်ဖက်ကနေ ကြည့်ရင် Feminist တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်လို့ ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်.. တချို့ Feminist တွေကျတော့လည်း Feminism ဆိုတာကို လွဲမှားစွာ အသုံးချတာမျိုး ရှိခဲ့တဲ့အခါ အဲဒါကို မြင်တဲ့သူတွေက Feminist ဆိုတာ ဆိုးရွားတဲ့အရာလို့ သွားပြီး conclusion ချပစ်လိုက်တာပေါ့နော်။
Q: ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရော အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မမ ဘာတွေ ထပ်လုပ်ချင်သေးလဲ?
အစ်မ Menstruation (ရာသီလာခြင်း) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို အစ်မ Challenge လုပ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ Feminism ကို အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ နားလည်လွယ်အောင် လုပ်ချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Feminist တွေ တော်တော်များများရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုက အရမ်း Middle Class နဲ့ Upper Middle Class က ဖြစ်နေတော့ အောက်ခြေလူတွေက သူတို့ရဲ့ Academic Term တွေ၊ သီအိုရီတွေ နဲ့ သွားပြောလို့ မရဘူးလေ… အစ်မက Personal Story ပေါ် အခြေခံပြီးတော့ Feminism ကို လူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးရတာကို ပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာ လူပြိန်းနားလည်အောင် လုပ်လိုက်တာပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာကလည်း ဒီလိုလုပ်မှပဲ လူများများရဲ့ ပါဝင်မှုကို ရမှာလေနော်.. ဆိုတော့ အဲ့အပိုင်းကို အစ်မက ကြိုးစားနေတယ်။ တော်တော်တော့ ခက်တယ်။
Panel Discussion on Literature တွင် ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က
Q : ဒါဆို မိန်းကလေးတွေအတွက် မမ ပေးချင်တဲ့ Message က ဘာဖြစ်မလဲ မမ
အစ်မပြောချင်တာကလေ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ ချစ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်…မျိုးသမီးတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပြိုင်ဘက်လို မြင်တာတွေ၊ Self Esteem Issue တွေ များတာကြောင့် တခြား မိန်းကလေးတွေကို အကောင်းမမြင်နိုင်တာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ parenting (မိဘအုပ်ထိန်းမှု) ရဲ့  အဲ့လို constant teachings (ပုံသေကားကျ သင်ကြားမှု) တွေ အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာရလို့ အဲ့လို ဖြစ်တာလေ။ ဒါ မိန်းကလေးတွေ အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ systemရဲ့  အပြစ်။
အဲဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လေးစားမှု ယုံကြည်မှုသာ ရှိကြမယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ပေးတဲ့ ဘောင်ထဲက တာဝန်တွေကိုလည်း ပြန်ငြင်းဆိုရဲတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်မယ်လို့ အစ်မက ထင်တယ်ပေါ့နော်.. ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ Train ပြီး ထည့်လာခဲ့တဲ့ ဒီအမူအကျင့်တွေကို ကြီးလာမှ ပြင်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါလို့ ပြောတာက ချက်ချင်းဆိုသလို ဖြစ်ဖို့ နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲတာပေါ့နော်.. အဲဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် aware ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိအောင် နေဖို့ပေါ့နော်..
နောက်တစ်ခုကကျတော့ ကိုယ့်ကို လက်ခံနိုင်တဲ့၊ ကိုယ့်ကို မဝေဖန်ဘဲ နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ပေါ့နော်.. အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ အစ်မက Sisterhood တစ်ခုပေါ့နော်.. ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်နေတဲ့ Majority of Girl Community တွေမှာတော့ (မိန်းကလေးအများစု) တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဆွဲချနေတာမျိုး များတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာမှာ အစ်မတွေ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်… ဒါကို လျှော့ချဖို့ဆိုတာက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် Support လုပ်တတ်တဲ့ Community ရှိဖို့ပေါ့နော်..အဲလိုသာ မရှိခဲ့ရင် အစ်မဆိုရင်လည်း ဒီအမျိုးသမီး ကိစ္စကို ဒီလောက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်နိုင်မယ်လို့ အစ်မ မထင်ဘူး။ ဥပမာ Vagina Monologue လို Play ဆိုရင် တစ်ခုလုံး Play ဖြစ်သွားအောင် အမျိုးသမီး ၅၀၊ ၆၀ ရဲ့ ပါဝင်မှုတွေကို ယူခဲ့ရတာပေါ့နော်.. ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Sisterhood Community တစ်ခုကို ထူထောင်ပြီး နေနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီ Patriarchy ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အစ်မထင်တယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက စာဖတ်ဖို့ပါ။ စာဖတ်တဲ့သူရဲ့  glow က အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ။ စာဖတ်ခြင်းရဲ့  ကောင်းကျိုးတွေက အရမ်းများပြီးတော့ မတူညီတဲ့ လူတွေ၊ အမြင်တွေ၊ ကမ္ဘာတွေ၊ နဲ့ အစ်မတို့ ကို မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ စာများများ ဖတ်သင့်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့တို့ ကမ္ဘာတွေက စနစ်တကျ limit လုပ်ခံရနေတော့လေ။
ကဲ.. ဒါတွေကတော့ မနန္ဒာ ပြောပြသွားခဲ့တဲ့ Feminism ဆိုတာ နဲ့ #Womenalsohavehpone ကမ်ပိန်းအကြောင်းလေးပါ ယောင်းတို့ရေ… ယောင်းတို့ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း မျှဝေပေးသွားကြပါဦး။
“Feminist တဈယောကျအနနေဲ့ အဈမရဲ့ အမွငျပွောရမယျဆိုရငျ အဈမက ဘုနျးဆိုတဲ့ အရာကို လကျမခံခငျြဘူး။”
ယောငျးတို့ရေ… ဒီတလော Social Media ပျေါမှာ #Womentoohavehpone (အမြိုးသမီးတှမှောလညျး ဘုနျးရှိတယျ) ဆိုတဲ့ Hashtag လေးနဲ့ ပရိုဖိုငျတှေ ပွောငျးကွတာ သတိထားမိကွမယျထငျပါတယျနျော… ဒီကမျပိနျးကို စတငျခဲ့တာက မအေးသီရိကြျော၊ မပွုံးသကျသကျကြျော၊ ဒေါကျတာ သကျစုထှေးနဲ့ မနန်ဒာ နဲ့ ဒေါကျတာဖွိုးသီဟ တို့ အဖှဲ့ကနေ စတငျခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ ယောကျြားလေးတှကေ ဘုနျးပိုကွီးတယျဆိုတဲ့ အယူအဆကို စပွီး စိနျချေါလိုကျတဲ့ ဒီကမျပိနျးဟာ မလေ ၂၀ရကျနကေ့ စတငျခဲ့ပွီး ဆယျရကျ ကမျပိနျးဖွဈတာမို့ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ အဆုံးသတျမယျလို့ သိရပါတယျ။ အကျဒျမငျ့အတှကျတော့ ဒီကမျပိနျးဟာ တျောတျောစိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကမျပိနျးကို စတငျခဲ့တဲ့ မနန်ဒာနဲ့ တှဆေုံ့ပွီး ဒီလို အမေးအဖွလေေးတှေ လုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ ယောငျးရေ…
Q : အရငျဆုံး မမအကွောငျးလေး မိတျဆကျပေးပါဦးရှငျ့..
A : အဈမနာမညျ နန်ဒာလို့ချေါတယျ။ အဈမက ရှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မနျစံဆိုတဲ့ ရှာကနေ လာတာပေါ့နျော.. ရနျကုနျမှာ ရှိနတောကတော့ (၃)နှဈကြျောကြျော (၄)နှဈလောကျ ရှိပွီ။ ပွီးတော့ အဈမက စာတှေ ရေးဖွဈတယျ။ ဘာသာပွနျဖွဈတယျ။ စာရေးတယျဆိုတာ Feminist Literature လို့ပဲ ချေါရမှာပေါ့နေျာ့.. အဲ့ Category ထဲမှာပဲ ရှိတယျ။ Feminist စာပေ လို့ချေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခု မကွာမီ အဈမက အင်ျဂလိပျလို တဈအုပျထုတျဖို့ရှိတယျပေါ့။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ အဈမက ဘာသာပွနျတဲ့ဟာပဲ ထုတျထားတာ မြားတယျ။ ပွီးတော့ အဈမ ကိုယျပိုငျ Blog လညျး ရေးဖွဈတယျ။ ရေးတာတျောတျောမြားမြားကလညျး Feminist စာပတှေေ၊ ကဗြာတှပေဲ မြားတယျ။
ပွီးရငျ ဒီလို ပွဇာတျတှမှော သရုပျဆောငျဖွဈတယျ။ ဥပမာ The Vagina Monologue လို Play (ပွဇာတျ) ဆိုရငျတော့ အဈမက Directing ပိုငျးနဲ့ Producing ပိုငျးကို တာဝနျယူခဲ့တယျပေါ့နျော.. မွနျမာနိုငျငံမှာ လုပျခဲ့တဲ့ဟာ.. ပွီးရငျ ကနျြတဲ့ဟာ တျောတျောမြားမြားမှာ အဈမက Fulltime Feminist အနနေဲ့ ရပျတညျတယျ။
Vagina Monologue Performance တှငျ အဖှငျ့စကား ပွောခဲ့စဉျက (Photo – Evelyn Yu Yu Swe)
Q: လတျတလော မမလုပျဖွဈနတောက?
A: လောလောဆယျက အဈမတို့ ဒီတဈနှဈအတှငျးမှာ အဲဒီ အဈမ ဘာသာပွနျတဲ့ စာရေးဆရာမကို မွနျမာနိုငျငံဖိတျဖို့အတှကျ အဈမတို့ ရညျရှယျနတောပေါ့နျော.. အဲဒါ တဈခုရှိတယျ။ အဲဒါပွီးရငျ ဒီ ကမျပိနျးပေါ့နျော… #Womentoohavehpone ဆိုတဲ့ ဖိုဝါဒီကို စိနျချေါတဲ့ ကမျပိနျးတဈခုပေါ့နျော.. အဲဒါကို လုပျနတေယျ။ အဲဒါပွီးရငျ အကွမျးဖကျမှုကို storytelling ပုံစံနဲ့ ရှငျးပွထားတဲ့ စာအုပျ၊ အရမျးထူထူကွီးတော့ မဟုတျဘူး.. ပါးပါးလေးနဲ့ လူတှကေို မကျဆခြေျ့အမြားကွီးပေးတဲ့ စာအုပျလေးကို ပွငျဆငျနတေယျပေါ့…အဲ့ ၃ခုကို လောလောဆယျ လုပျနတေယျ။
Q : လတျတလော လုပျဖွဈနတောတှထေဲက #womentoohavehpone ဆိုတဲ့ ကမျပိနျးကို ဘယျကစလုပျဖွဈခဲ့တယျဆိုတာလေးလညျး သိပါရစေ မမ။
A : ဟိုးတလောက Social Media ပျေါမှာ ဖွဈသှားတဲ့ ထဘီကိစ်စပေါ့.. ဒီကိစ်စပျေါ အခွခေံပွီးတော့ ဖွဈလာတဲ့ Discussion တှကေ ဘုနျးဆိုတာနဲ့ပဲ ကပျနတေယျ။ မိနျးမတှကေ ဘုနျးမရှိဘူး။ ယောကျြားတှထေကျ တဈဆငျ့နိမျ့ပါတယျ၊ တဈဆငျ့နိမျ့ပါတယျဆိုတဲ့ Comment တှေ၊ Conversation တှကွေောငျ့။ ပွီးတော့ မိနျးမမဝငျရဆိုတဲ့ နရောကို ဝငျသှားတယျ။ ဘာညာပေါ့နျော.. အဓိက အဲဒီ Conversation တှကေ အဈမတို့ကို ဒီကမျပိနျးစဖို့အတှကျ Provoke လုပျလိုကျတာပေါ့နျော.. တှနျးအားပေးလိုကျသလိုပဲပေါ့။
ပွီးတော့ အဈမ ဘုနျးအကွောငျး နညျးနညျးပွောမယျနျော.. အဈမကွားဖူးသလောကျဆိုရငျ ဘုနျးဆိုတာကလေ အစတုနျးက Originally စခဲ့တာကလေ အလုပျလုပျတဲ့လူကို ပွောတာ ညီမလေးရယျ။ ဥပမာ ညီမလေးက အလုပျလုပျတယျ။ စှမျးစှမျးတမံလုပျကိုငျတယျဆိုရငျ ဒါ ညီမလေးကို ဘုနျးရှိတဲ့သူ တဈယောကျလို့ အသိအမှတျပွုတယျ။ အဲဒီစကားလုံးက အဲ့အတှကျ စခဲ့တာ။ ဒါပမေဲ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာကြ အဲဒီ အသုံးအနှုနျးကို ဘာသာရေးနဲ့ သှားပွီး စပျပဈလိုကျတယျ။
အမြိုးသမီးကို ဘုနျးနဲ့မကပျတာက ဒီဘုနျးသညျ ယောကျြားလေးနဲ့ပဲ ပါလာတဲ့အရာ၊ ယောကျြားလေးတှမှောပဲ ရှိသငျ့တဲ့အရာဆိုပွီးတော့ ဘုနျးဆိုတဲ့ မွငျ့မွတျတဲ့ Spiritual Power က အမြိုးသားတှဆေီမှာပဲ ကပျတယျဆိုတဲ့ အမွငျဖွဈသှားတယျပေါ့။ ဥပမာ မွနျမာတှေ အရမျးသုံးကွတဲ့ “ယောကျြားတို့ ဘုနျး လကျရုံး၊ မိနျးမတို့ ဘုနျး ဆံထုံး” ဆိုတာတှကေး မညီမြှမှုကို ထငျရှားစှာ ပွလိုကျတာပဲ။ ဒါက အမြိုးသားတှမှောသာ လုပျနိုငျကိုငျနိုငျစှမျး၊ လကျရုံးရညျ ရှိတယျဆိုတဲ့ messageကို ပေးနတောလေ။ Feminist တဈယောကျအနနေဲ့ အဈမရဲ့ အမွငျပွောရမယျဆိုရငျ အဈမက ဘုနျးဆိုတဲ့ အရာကို လကျမခံခငျြဘူး။ အမြိုးသားလညျး မရှိဘူး။ အမြိုးသမီးလညျးမရှိဘူး။ ဒါက လူလူခငျြးပဲ။ ကောငျးတာလုပျရငျ ကောငျးတဲ့လူ၊ မကောငျးတာ လုပျရငျ မကောငျးတဲ့လူ ဒါပဲပေါ့နျော.. အဲ့လိုမြိုးပဲ ခံယူထားတယျ။ လူတှေ လကျခံထားတဲ့ ကောငျးတယျဆိုတဲ့ ဘုနျးဆိုတဲ့အရာကို မိနျးမတှလေညျး ပိုငျဆိုငျတယျဆိုတဲ့ Positive message ကို လူတှဆေီ ပို့ပေးခငျြတာပေါ့။
Q : ကမျပိနျးအပျေါ Public ရဲ့ Response ကရော ဘယျလို ရှိလဲ အဈမ
A : အိုး.. အဈမတို့ မထငျထားဘူး။ ခုနက ညီမလေးကို အဈမရှငျးပွသလိုပဲ။ တခြို့တှကေ ဒီဘုနျးဆိုတာ ဖိုဝါဒီက ထှငျထားတဲ့ စကားလုံး၊ ဖိုဝါဒီကို အားပေးတယျ ဘာဖွဈတယျ၊ ညာဖွဈတယျဆိုတဲ့ မှတျခကျြတှကေိုပဲ အဈမတို့က မြှျောလငျ့ထားတာ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ Feminist တှဆေီကပဲ အဈမတို့ မြှျောလငျ့ထားတာပေါ့နျော.. ဒါပမေဲ့ message က အဈမတို့က Clear message ပေးထားတယျ။ အဈမတို့ ကမျပိနျးရဲ့ Description ကိုလညျး သခြောရေးထားတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီဟာကို လုပျရတယျ။ ဒီဟာက ဘာတှကေို အခကျအခဲ ဖွဈစတေယျဆိုတာ ရေးထားတာ ရှငျးလငျးမှုရှိတယျ ထငျတယျ။ အမြားကွီး ပါဝငျလာတယျ။ ၃၀၀၀ နီးပါးလောကျ ပါဝငျလာတယျ… ဒါက ခုနက သီရိကို အဈမမေးကွညျ့တော့ ပွောပွတာ။ Page လညျး Like လုပျတဲ့လူ မြားလာတယျ တဈရကျ နှဈရကျ အတှငျးမှာ… အခုထိတော့ ကောငျးတဲ့ မကျဆခြေျ့တှေ ရတာပေါ့နျော.. တဈခု အဈမသတိထားမိတာက တျောတျောမြားမြားလေးကတော့ ဒါပမေဲ့ ၃၀ ရကျနမှေ့ာ ပိုပွီး ပွောလို့ရမယျထငျတယျ အဲဒါက.. ပါဝငျတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားက အမြိုးသမီးတှေ ဖွဈနတေယျ။ တျောတျောမြားမြားလေးကလေ အသကျအရှယျမြိုးစုံပေါ့နျော.. ငယျငယျလေးကနေ ဒီ ၁၅ လောကျကနေ အသကျကွီးပိုငျးတှေ ၄၀၊ ၅၀ လောကျရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ပါဝငျလာတာကို တျောတျောလေး တှရေ့တယျ။ သူတို့ ဒီလို ပါဝငျပေးတာကို အဈမလညျး တျောတျောလေး အံ့သွဝမျးသာတယျ။
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY အတှကျ UNOPS တှငျ speech ပေးခဲ့စဉျ (Photo – Anders Lee)
Q: မသိမသာ ခှဲခွားမှုတှကေို လကျခံနကွေတဲ့အပျေါ မမရဲ့ အမွငျကရော?
A : ဒါကလေ Normalization လို့ချေါတယျ။ ကိုယျငယျငယျတုနျးက မွငျတဲ့အရာကို ပုံမှနျလို့ ထငျလာတတျတာမြိုးလေ။ ဥပမာ မိသားစုထဲမှာ အဈကိုက တဈမြိုး ဆကျဆံခံရတယျ၊ ကိုယျက တဈမြိုး ဆကျဆံခံရတယျ။ ဆိုပါစို့.. ကိုယျ့အမကေ ကိုယျ့အဖလေောကျ ပတျဝနျးကငျြမှာ အရေးပေးမခံရဘူးဆိုတာကို မွငျပွီး ကွီးလာတဲ့ ကလေးတဈယောကျဆိုရငျ သူကိုယျတိုငျကလညျး ကွီးလာရငျ သူ့ကို လူတှကေ အမြိုးသားတဈယောကျလောကျ အရေးမပေးဘူးဆိုရငျလညျး သူ လကျခံနိုငျတယျ။ ဘာလို့လဲဆို သူကိုယျတိုငျက အဲဒီလို မိသားစုမှာ ကွီးလာတဲ့အတှကျပေါ့… တကယျတော့လေ ညီမလေး.. အဲဒီလို Gender Issue တှကေလေ အကွီးကွီး ကွညျ့စရာမလိုဘူး.. အိမျထဲမှာပဲ ရှိတယျ။ အိမျထဲကနပေဲ စလာတာပဲ။ ခှဲခွားဆကျဆံတယျဆိုတာက အိမျကနေ စတာ။ အိမျကနေ လမျးကို ရောကျသှားတယျ။ လမျးကနေ ကြောငျးကို ရောကျသှားတယျ။ ကြောငျးကနေ ဘုရားကြောငျးရောကျသှားတယျ။ အဲ့လိုပေါ့။ အကွီးကွီးနရောတှမှော ဖွဈတာမဟုတျဘူး။ သေးသေးလေး နရောကနပွေီး ဒါဟာ ပုံမှနျပဲဆိုတဲ့ Normalization ဖွဈအောငျ ပုံသှငျးခံခဲ့ရတာ။ ယောကျြားက ရိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကလေးမှေးပွီး ထိနျးကြောငျးရတဲ့ ကိစ်စပဲဖွဈဖွဈ မိနျးမဆိုတာ အဲ့လိုပဲ… ခံရတယျ ဆိုတဲ့ ဖွသေိမျ့မှု တဈခုအောကျမှာ အဈမတို့က ငွိမျလိုကျရတာမြိုးပေါ့။ ဒါက ပွောငျးလို့ရတယျ။
Related Article >>> ဒေါကျတာ ဖွိုးသီဟ ပွောပွတဲ့ ဓမ်မတာလာခွငျး နဲ့ လှဲမှားနတေဲ့ အယူအဆမြားအကွောငျး
Q: Feminist ဆိုတာကို အဈမ ဘယျလို ခံယူထားလဲ။
A: အဓိကက Feminist တဈယောကျဖွဈခွငျးဆိုတာက ကိုယျသငျယူပွီးသား ဖိုဝါဒီ အကငျြ့စရိုကျတှကေို ဖယျဖြောကျတာ။ ဥပမာ- ကိုယျ့ မိနျးမ ဖွဈခွငျးကို အထငျသေးစျောကားပွီး နှိမျ့ခပြွောဆိုတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးမှာဆို အသံ တိတျနားထောငျတာမြိုး မလုပျဖွဈတော့ဘူး။ ကိုယျ့ ခံယူခကျြပျေါမှာ ကိုယျ မားမားမတျမတျ ရပျတညျတယျ။ွပောဖွဈတယျ။
ဒီမှာက ယောကျြားလေးတှကေိုဆို Be Nice ဆိုပွီး သငျတာမြိုး သိပျမတှရေ့ဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကောငျးအောငျနဆေိုတာလောကျပဲ။ မိနျးကလေးတှကေိုကတြော့ Constantly(တောကျလြှောကျ) ငယျငယျကတညျးကကို သူမြားတှကေို Nice ဖွဈဖို့ သငျခဲ့ရတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ Rape Case တို့ Sexual Harassment ဖွဈတာတို့ အဲလို ကိစ်စတှဆေိုရငျ Public Place မှာ ဖွဈနတောတောငျမှ မိနျးကလေးတှကေ ကွိတျခံနကွေရတာ။ အသံမထှကျရဲကွဘူး။ အဲဒါလေ ဘေးလူကို ထိခိုကျမှာစိုးလို့။ သူကသာ အျောလိုကျရငျ အဲဒီ ဘေးလူကို ထိခိုကျမှာ၊ သူမြားက တဈခုခု လုပျမှာ ဒါမှမဟုတျရငျ သူ့ကို သူမြားက မယုံကွမှာ အဲဒီကွောကျစိတျတှေ အောကျမှာ မိနျးကလေးတှေ ရှငျသနျလာတာ တအားမြားတာကွောငျ့ပါပဲ။ နောကျတဈခုက မိနျးကလေးတှေ တိတျနရေငျ အဈမတို့က အရမျးသဘောကကြွတယျ။ ဘာလို့လဲ… မိနျးကလေးဆိုတာကို စကားမပွောဘဲ ငွိမျငွိမျလေးနပွေီး အိမျအလုပျတှေ နိုငျနိုငျနငျးနငျးလုပျတယျဆိုတာကို မိနျးကလေးတှမှော ရှိရမယျ့ အရညျအခငျြးတဈခုလို သတျမှတျထားကွလို့လေ။ ကိုယျ့အမွငျကိုယျ ပွောပွရဲတဲ့ မိနျးကလေးတှဆေို လူတှကေ အမွငျကတျကွတယျ။ ဒါကို ပွောငျးလဲ ပဈရမှာပေါ့။
Q : Feminism အပျေါမှာ လူတှရေဲ့ လကျခံနိုငျစှမျးကရော မမ။ ဘယျလို အခွအေနေ ရှိလဲ?
A :Feminist ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မွနျမာနိုငျငံမှာ Negative ဖွဈနတေဲ့ အရာနဲ့ attached ဖွဈနတေယျ။ ဘာလဲဆိုရငျ Feminist ဆိုရငျ ယောကျြားတှကေို မုနျးကွတယျ။ ဟို.. သမားရိုးကနြညျးကို မလိုကျကွဘူး။ မလေးစားကွဘူး။ ရိုးရာယဉျကြေးမှုကို မလေးစားကွဘူးဆိုတဲ့ Negative side တှကေိုပဲ လူတှကေ အစာကြှေးခံနရေတဲ့အခါမှာ ကောငျးတဲ့ အခကျြတှကေို လှတျသှားတယျ။ Feminist တှကေိုလကျခံဖို့က သူတို့အတှကျ အရမျးကို ခကျနတော။ မွနျမာနိုငျငံ အတိုငျးအတာနဲ့ရော၊ နိုငျငံတကာ အတိုငျးအတာနဲ့ရော ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒီ Feminism ကို လကျခံတဲ့အား အရမျးနညျးနတေယျ။
ဘာလဲဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာဆို အကွောငျးအမြိုးမြိုးရှိတယျ ညီမလေးရယျ… နံပါတျ (၁) ကကတြော့ ခဏကပွောတဲ့ ဘုနျးဆိုတဲ့ Concept ပေါ့နျော… မိနျးကလေးတှကေ မှေးကတညျးက ယောကျြားလေးတှထေကျ တဈဆငျ့နိမျ့တယျဆိုတဲ့ဟာကို သှေးတှေ၊ သားတှေ၊ အရိုးတှထေဲထိ စှဲနအေောငျ ယုံကွညျထားကွတဲ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာ ကွီးလာတဲ့အတှကျ အဲဒါကို မပွောငျးလဲနိုငျဘူး။ မိနျးကလေးနဲ့ ယောကျြားလေးက တနျးတူတယျဆိုတာကို ပွောနတေဲ့ Feminist ကို ဘယျလိုမှ ကွညျ့လို့မရဘူး။ နောကျတဈမြိုးကတြော့ Feminist ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အနောကျတိုငျး စကားလုံး၊ အနောကျတိုငျး ယဉျကြေးမှုဆိုတဲ့ အမွငျမှားမှုတှေ၊ အရိုးစှဲမှုတှေ ရှိနတေယျ။ ပွောရမယျဆို ဒီမိုကရစေီဆိုတာကလညျး အနောကျတိုငျးက လာတဲ့ Idea ပဲလေ.. ဘာကွောငျ့ အနောကျက လာတဲ့ Idea ကွီးအတှကျ ပေးဆပျနကွေတာလဲ? ဘာကွောငျ့ ဖကျတှယျထားကွတာလဲ? မွနျမာနိုငျငံကွီးအတှကျ ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ပေးဆပျနကွေတာလေ။ Feminism ကလညျး အဲဒီလိုပဲဆိုတာကို တျောတျောမြားမြားက မခြိတျဆကျမိဘူး။ အဲဒါကတြော့လညျးတဈဖကျကနေ ကွညျ့ရငျ Feminist တှရေဲ့ လိုအပျခကျြလို့ ပွောလို့ရတယျပေါ့နျော.. တခြို့ Feminist တှကေတြော့လညျး Feminism ဆိုတာကို လှဲမှားစှာ အသုံးခတြာမြိုး ရှိခဲ့တဲ့အခါ အဲဒါကို မွငျတဲ့သူတှကေ Feminist ဆိုတာ ဆိုးရှားတဲ့အရာလို့ သှားပွီး conclusion ခပြဈလိုကျတာပေါ့နျော။
Q: ဒီထကျပိုပွီးတော့ရော အမြိုးသမီးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မမ ဘာတှေ ထပျလုပျခငျြသေးလဲ?
အဈမ Menstruation (ရာသီလာခွငျး) နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အတှေးအချေါ အယူအဆတှကေို အဈမ Challenge လုပျခငျြတယျ။ ပွီးတော့ Feminism ကို အောကျခွလေူတနျးစားတှေ နားလညျလှယျအောငျ လုပျခငျြတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Feminist တှေ တျောတျောမြားမြားရဲ့ ဖွတျသနျးမှုက အရမျး Middle Class နဲ့ Upper Middle Class က ဖွဈနတေော့ အောကျခွလေူတှကေ သူတို့ရဲ့ Academic Term တှေ၊ သီအိုရီတှေ နဲ့ သှားပွောလို့ မရဘူးလေ… အဈမက Personal Story ပျေါ အခွခေံပွီးတော့ Feminism ကို လူတှနေဲ့ ခြိတျဆကျပေးရတာကို ပွောရမယျဆိုရငျကှာ လူပွိနျးနားလညျအောငျ လုပျလိုကျတာပေါ့။ ဒီနိုငျငံမှာကလညျး ဒီလိုလုပျမှပဲ လူမြားမြားရဲ့ ပါဝငျမှုကို ရမှာလနေျော.. ဆိုတော့ အဲ့အပိုငျးကို အဈမက ကွိုးစားနတေယျ။ တျောတျောတော့ ခကျတယျ။
Panel Discussion on Literature တှငျ ဆှေးနှေးခဲ့စဉျက
Q : ဒါဆို မိနျးကလေးတှအေတှကျ မမ ပေးခငျြတဲ့ Message က ဘာဖွဈမလဲ မမ
အဈမပွောခငျြတာကလေ တဈယောကျကို တဈယောကျ တနျဖိုးထားတတျဖို့၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထားတတျဖို့၊ ခဈြတတျဖို့ပေါ့နျော…မြိုးသမီးတှဟော တဈယောကျကို တဈယောကျ ပွိုငျဘကျလို မွငျတာတှေ၊ Self Esteem Issue တှေ မြားတာကွောငျ့ တခွား မိနျးကလေးတှကေို အကောငျးမမွငျနိုငျတာလညျး ဖွဈတယျ။ ဒါကလညျး ပတျဝနျးကငျြ နဲ့ parenting (မိဘအုပျထိနျးမှု) ရဲ့ အဲ့လို constant teachings (ပုံသကေားကြ သငျကွားမှု) တှေ အောကျမှာ ကွီးပွငျးလာရလို့ အဲ့လို ဖွဈတာလေ။ ဒါ မိနျးကလေးတှေ အပွဈမဟုတျဘူး။ systemရဲ့ အပွဈ။
အဲဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့ လေးစားမှု ယုံကွညျမှုသာ ရှိကွမယျဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြက ပေးတဲ့ ဘောငျထဲက တာဝနျတှကေိုလညျး ပွနျငွငျးဆိုရဲတဲ့ မိနျးကလေးတှေ ဖွဈမယျလို့ အဈမက ထငျတယျပေါ့နျော.. ငယျငယျကတညျးကနေ Train ပွီး ထညျ့လာခဲ့တဲ့ ဒီအမူအကငျြ့တှကေို ကွီးလာမှ ပွငျပါ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိပါလို့ ပွောတာက ခကျြခငျြးဆိုသလို ဖွဈဖို့ နညျးနညျးတော့ ခကျခဲတာပေါ့နျော.. အဲဒါကို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ aware ဖွဈပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု ရှိအောငျ နဖေို့ပေါ့နျော..
နောကျတဈခုကကတြော့ ကိုယျ့ကို လကျခံနိုငျတဲ့၊ ကိုယျ့ကို မဝဖေနျဘဲ နားထောငျပေးနိုငျတဲ့ ဝနျးကငျြတဈခုကို တညျဆောကျဖို့ပေါ့နျော.. အင်ျဂလိပျလိုကတော့ အဈမက Sisterhood တဈခုပေါ့နျော.. ပတျဝနျးကငျြမှာ မွငျနတေဲ့ Majority of Girl Community တှမှောတော့ (မိနျးကလေးအမြားစု) တဈယောကျကို တဈယောကျ ဆှဲခနြတောမြိုး မြားတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာမှာ အဈမတှတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြပေါ့နျော… ဒါကို လြှော့ခဖြို့ဆိုတာက တဈယောကျကိုတဈယောကျ Support လုပျတတျတဲ့ Community ရှိဖို့ပေါ့နျော..အဲလိုသာ မရှိခဲ့ရငျ အဈမဆိုရငျလညျး ဒီအမြိုးသမီး ကိစ်စကို ဒီလောကျ တှငျတှငျကယျြကယျြ လုပျနိုငျမယျလို့ အဈမ မထငျဘူး။ ဥပမာ Vagina Monologue လို Play ဆိုရငျ တဈခုလုံး Play ဖွဈသှားအောငျ အမြိုးသမီး ၅၀၊ ၆၀ ရဲ့ ပါဝငျမှုတှကေို ယူခဲ့ရတာပေါ့နျော.. ဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ Sisterhood Community တဈခုကို ထူထောငျပွီး နနေိုငျမယျဆိုရငျ ဒီ Patriarchy ရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ကြျောလှားနိုငျလိမျ့မယျလို့ အဈမထငျတယျ။
နောကျဆုံးတဈခုက စာဖတျဖို့ပါ။ စာဖတျတဲ့သူရဲ့ glow က အရမျးကို တနျဖိုးရှိတဲ့ အရာတဈခုပဲ။ စာဖတျခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေ အရမျးမြားပွီးတော့ မတူညီတဲ့ လူတှေ၊ အမွငျတှေ၊ ကမ်ဘာတှေ၊ နဲ့ အဈမတို့ ကို မိတျဆကျပေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှေ စာမြားမြား ဖတျသငျ့တယျ။ ငယျငယျကတညျးက သူ့တို့ ကမ်ဘာတှကေ စနဈတကြ limit လုပျခံရနတေော့လေ။
ကဲ.. ဒါတှကေတော့ မနန်ဒာ ပွောပွသှားခဲ့တဲ့ Feminism ဆိုတာ နဲ့ #Womenalsohavehpone ကမျပိနျးအကွောငျးလေးပါ ယောငျးတို့ရေ… ယောငျးတို့ရဲ့ အမွငျကိုလညျး မြှဝပေေးသှားကွပါဦး။
Tags: discrimination, feminism, Hpone, Interview, Nandar, women